Shir caalami ah oo looga hadlayo hagaajinta nidaamka Dowliga ah ee Adanaha oo isniinta ka furmaya Istanbul. | Baydhabo Online
Shir caalami ah oo looga hadlayo hagaajinta nidaamka Dowliga ah ee Adanaha oo isniinta ka furmaya Istanbul.
In ka badan 70 Madaxweyne iyo R/wasaarayaal isugu jira ayaa lagu wadaa in ay ka qeyb galaan Shir caalami ah oo looga hadlayo hagaajinta nidaamka hab dhaqanka Adanaha oo isniinta ka furmi doono Istanbul.Shirweynaha Caalamiga ah oo uu soo qabanqaabiyay Xoghaya Guud ee Qaraamada Midoobay Ban Ki Mon waxa uu qeyb ka yahay dadaalada Qaraamada midoobay ee ku wajahan la tacaalida arrimaha dadyowga dalalka caalamka iyo ka hortaga musiibooyinka.
Qodobada looga hadlayo Shirweynaha waxaa ka mid yihiin sidii loola tacaali lahaa arrimaha barakacyaal gaaraya 60 milyan qof oo dunida ku farirsan kuwasoo degaanadooda uga barakacayeen dagaalo, iyo isbedelka cimilada aduunka .
In ka badan 6000 qof oo qeybo kala duwan ka socoda ayaa waxa ay ka qeyb galayaan shirkan Isniinta ka furmayo magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga.